Hagaha kama dambaysta ah ee Quercetin
Waa maxay quercetin?
Quercetin (117-39-5) waxaa iska leh koox xeryo loo yaqaan 'flavonoids'. Magaceeda kiimikada ah waa 3, 3 ′, 4 ′, 5,7-pentahydroxyflavone. Waa midab si dabiici ah uga dhex jira khudaar badan, miro, iyo badar waxayna ka mid yihiin kuwa ugu horreeya antioxidant-ka cuntada. Quercetin ayaa sidoo kale lagu heli karaa qaab kaabsal ah iyo sidoo kale qaab budo ah oo ah kaabis cunto ah.
Quercetin (117-39-5) waxay ka caawisaa jirka inuu la dagaallamo waxyeelada ay keento xag-jiryada bilaashka ah ee ku xiran cuduro badan oo raaga. Guryaheeda antioxidant-ka ayaa waliba ka caawiya yareynta cadaadiska dhiigga, astaamaha xasaasiyadda, iyo bararka.
Sidee Quercetin u shaqaysaa?
Quercetin wuxuu leeyahay waxyeelo anti-bararka iyo antioxidant-ga kaa caawiya yareynta caabuqa qanjirka 'prostate'. Waxay awood u leedahay inay xakameyso gubashada xeryahooda kale ama molecules maxaa yeelay waxay ka kooban tahay kiimiko polyphenolic ah oo ka baqaya xagjirnimada xorta ah.
Waxa kale oo ay xannibtaa ama firfircooni ku noqotaa howlaha borotiinno badan. Tusaale ahaan, waxay joojineysaa ficillada kujira borotiinka iyadoo isla waqtigaasna ay dhaqaajineyso kuwa qaata estrogen-ka.
Daraasadaha qaarkood waxay soo jeedinayaan quercetin:
Hoos u dhig dhaawaca waxyeellada dufanka oo ay ku yaraato qashin
Jooji siideynta maadada loo yaqaan 'histamine', oo ah maaddo nafaqo leh oo xannibaysa unugyada firfircoonaanta oo saameysa xasaasiyadda
Neutralize ROS iyo xag-jiryo bilaash ah
Kordhi heerarka glutathione. Glutathione waxay ka hortagtaa dhaawaca soo gaara unugyada gacanta ee ay sababaan xagjirnimada bilaashka ah
Xannibaadda dariiqooyinka waxyeellada leh iyo maaddooyinka (oo ay ku jiraan CRP iyo COX-2) ayaa ka dib yareynta caabuqa
Kordhinta awoodda guud ee antioxidant-ga dhiigga
Noqo mid firfircoon oo ka dhan ah fayrasyada iyo bakteeriyada qaarkood
Wisepower, soosaaraha tooska ah ee alaabta ceeriin ee quercetin,
awoodda wax soo saar bille ah illaa 1,000KG.
Quercetin-ka si uu waxtar u yeesho waa inaad isticmaashaa oo keliya marka uu takhtarku kugula taliyo. Xitaa haddii aad qaadatay go'aan shaqsiyeed si aad u isticmaasho, waxaad u baahan tahay inaad ka hesho ogolaansho dhaqtarkaaga. Iyo ka hor intaadan bilaabin qaadashada kaydinta quercetin, hubi inaad aqriso macluumaadka bukaanka ee kuqoran xaashiyaha dheeriga ah. Raac tilmaamaha si taxaddar leh kahor isticmaalka quercetin, oo hubi inaad weydiiso bixiyahaaga daryeelka caafimaadka ama takhtarka wixii su'aalo ah ee aad maskaxda ku hayso.
Si quercetin ay u noqoto mid wax ku ool ah, ku dheji qiyaasta uu kuu soo qoray daryeel caafimaad bixiyahaaga - ha kordhin ama ha yareynin qiyaasta ama ha joojin isticmaalka dheeraadka adiga oo aan la tashan bixiyahaaga daryeelka caafimaadka. Ogsoonow inaad sare u qaaddo Qiyaasta quercetin waxaa laga yaabaa inuu culeys badan saaro kelyahaaga. Micnaheedu waa inaad u baahan tahay oo keliya inaad qaadatid qaddarka laguu qoray si aad uga hortagto welwellada caafimaad ee aan loo baahnayn.
Quercetin ayaa sida caadiga ah loo qaataa maalin kasta, oo aad uga faa iideysato saameyntooda, waa inaad si joogto ah u qaadataa.
Haddii aad go'aansato inaad qaadato kaabis laba jibbaar ah markaa qiyaasta maalinlaha ah ee lagu taliyey waa 500 mg. Dadka qaar waxay qaadan karaan ilaa 1000 mg maalin kasta si ay ugu raaxaystaan ​​buuxa faa'iidooyinka quercetin. Kordhinta ayaa waliba laga yaabaa inay kujirto fiitamiin C, bromelain ama wax kasta oo jidhkaaga ka caawiya inuu si wax ku ool ah u nuugo quercetin.
Qiyaasta quercetin ee ku habboon shakhsiga waxay kuxirantahay arrimo ay ka mid yihiin taariikhda caafimaadka, jinsiga, iyo da'da. Taasi waa sababta aad ugu baahan tahay inaad la hadasho dhakhtarkaaga, daryeel caafimaad bixiyahaaga, ama farmashiistaha si aad u hesho talo iyo qiyaas habboon haddii aad doorato inaad qaadato quercetin.
Dhismooyinka antioxidant-ka ee quercetin-ka ayaa lala xiriiriyay faa'iidooyin caafimaad oo badan. Qaar ka mid ah kuwan faa'iidooyinka quercetin waxaa ka mid ah:
Quercetin difaaca Difaaca
Isticmaalka Quercetin wuxuu yeelan karaa xoogaa saameyn togan habka difaaca jirka. Hal daraasad, 1000 qof ayaa la saaray qiyaas ahaan 1000 mg oo ah quercetin maalintii. Daawada waxay ku guuleysatay inay si weyn u yareyso maalmahooda jiran iyo darnaanta calaamadaha hargabka caadiga ah.
Ciyaaraha jimicsiga adkeysiga waxay u badan tahay inay ku dhacdo hargab caadi ah sababta oo ah waxay badanaa ku buuxiyaan jirka jirkooda oo fidiya. Qiyaas ah 1000 mg oo quercetin ah maalin kasta ayaa la helay si loo yareeyo dhacdooyinka hargabka caadiga ah iyo dhacdooyinka caabuqyada neef-mareenka 40 ciyaartooy oo tababbaran oo ku saabsan tababarka dulqaadashada.
Quercetin waxaa la siiyay ka dib 3 maalmood oo jimicsi dulqaad leh ah mudada jimicsiga oo kabadan labo todobaad.
Quercetin sida wakiilka ka hortagga gabowga
Baarayaasha waxay rumeysan yihiin in quercetin uu yahay “senolytic” taas oo joojin karta geedi socodka gabowga. Hal daraasad oo lagu sameeyay maqaarka bini aadamka, quercetin ayaa laga helay si loo baabi'iyo unugyada dareemayaasha waxyeelada leh kuwaas oo mas'uul ka ah gabowga.
Daraasad kale, quercetin waxaa laga helay awood u leh inay kordhiso caabbinta walaaca ee dirxiyeyaasha iyo sidoo kale inay kordhiyaan cimrigooda. Daraasad kale oo jirta, quercetin ayaa la ogaaday inay ku kordhineyso nolosha dirxiga 15% iyadoo isla mar ahaantaana kordhineysa awooda ay ku maareeyaan buufiska. Natiijooyinka daraasaddan waxay soo jeedinayaan in quercetin loo isticmaali karo wakiil anti-gaboobaya.
Neefta iyo xasaasiyada
Haddii aad xasaasiyad qabtid ama aad qabtid neefta, quercetin waxay jawaab u noqon kartaa dhibaatadaada. Dadka qaarkiis ayaa isticmaaley waxay sheegeen in ay ka caawineyso talinta Th2. Quercetin waxay dejin kartaa muruqyada siman ee marinka hawo mareenada iyadoo wanaajineysa socodka marinka.
Quercetin ayaa sidoo kale la helay si loo yareeyo xasaasiyadaha ay ka midka yihiin cuntooyinka ay ka midka yihiin soy, nuts geedka, kalluunka qolofleyda, qamadiga, kalluunka, looska, ukunta, lactose, iyo cunnooyinka kale ee kiciya jawaabta xasaasiyadda. Hal daraasad xayawaan, waxaa lagu ogaadey in quercetin ay isku dheeli tirto waxqabadka talaalka isla markaana ay yareyn karto xasaasiyadaha.
Haddii aad la xanuunsaneysid unugga firfircoonaanta unugyada naasaha, unugyada dhifku wuxuu siidaayaa unugyada sida cytokines, leukotrienes, histamine, iyo kiimikooyin kale oo waxyeeleynaya jirkaaga. Kiimikooyinkani waxay keenaan caabuq la mid ah kii dhaca inta lagu gudajiro jawaabta xasaasiyadda.
Quercetin wuxuu xannibi karaa dhaqdhaqaaqa unugyada naaska ee jirkaaga sidaa darteed wuxuu ka horjoogsanayaa sii deynta kiimikooyinka waxyeellada leh ee keena bararka.
Haddii aad la xanuunsanayso qandho hay, waxay ka dhigan tahay hiddo-wadahaaga hiddaha hidde-nimada H1 oo ah mid aad loo sharxay. Markii hidda-wadaha guud la muujiyo, astaamaha xasaasiyaddaadu way sii xumaan doonaan. Quercetin ayaa la ogaaday inay yareyso muujinta hiddo-wadaha H1R sidaa darteed yaraynta astaamaha xasaasiyadda.
waxay yareyn kartaa caabuqa
Cudurka ku dhaca waxaa sababa xagjiryo bilaash ah oo dhaawac u geysta unugyada wiilasha. Heerar sare oo xag-jir ah oo bilaash ah ayaa dhaqdhaqaaqa hiddo-wadaha dhaliya caabuq.
In kasta oo jidhkaagu u baahan yahay caabuq yar si uu ula dagaallamo caabuqyada una bogsado, u adkaysashada ama heerarka sare ee caabuqa ayaa loo yaqaanaa inay sababaan dhibaatooyin caafimaad oo ay ka mid yihiin kelyaha iyo cudurrada wadnaha, iyo sidoo kale qaar kaansar.
Daraasadaha qaarkood waxay muujiyeen in quercetin ay ka caawiso yareynta caabuqa. Hal daraasad oo lagu sameeyay tijaabada tuubada-tijaabada, waxaa lagu ogaaday in quercetin ay awood u leedahay inay yareyso astaamaha caabuqa unugyada bini aadamka sida burooyinka burooyinka necrosis interleukin-6 (IL-6) iyo alfa (TNFα).
Daraasad kale oo ku lug leh 50 haween ah oo laga helay cudurka 'rheumatoid arthritis', maadooyinka ayaa qaatay 500 mg oo ah quercetin muddo sideed todobaad ah. Siddeed toddobaad kadib, kaqeybgalayaashu waxay soo sheegeen hoos u dhac weyn oo ku yimid xanuunka waxqabadka kadib, xanuun subaxa, iyo adkaysiga subaxdii.
Kaqeybgalayaashu sidoo kale waxay la kulmeen hoos u dhac aad u weyn oo ku saabsan calaamadaha caabuqa marka loo eego kuwa kooxda ka talisa.
waxay yareyn kartaa astaamaha xasaasiyadda
Astaamaha ka hortagga bararka ee 'quercetin' ayaa laga yaabaa inay ku siiso daaweyn calaamadaha xasaasiyadda. Daraasadaha xayawaanka iyo tijaabada tuubooyinka waxay ogaadeen in quercetin ay xannibi karto ensaemiyada mas'uul ka ah caabuqa sidoo kale waxay xakameysaa kiimikooyinka kor u qaada caabuqa.
Tusaale ahaan, hal daraasad, jiilasha u nugul lawska ayaa lasiiyay suppleetin supplements. Natiijooyinka daraasadda waxay ahaayeen kuwo rajo fiican leh maadaama ay muujisay in qaadashada kaabayaasha ay xakameysey falcelintooda anaphylactic.
waxaa laga yaabaa inuu yeesho saameyno ka-hortagga kansarka
Guryaha la-dagaalanka kansarka ee quercetin-ka waxaa sidoo kale loo aanayn karaa dhismayaasha antioxidant-ka. Qaar ka mid ah daraasadaha xayawaannada iyo tuubbada-tijaabada, waxaa laga helay quercetin-ka inay sababto geerida unugyada kansarka qanjirka 'prostate' oo joojiya koritaanka unugyada isla.
Daraasadaha kale, waxaa lagu ogaadey in quercetin ay saameyn la mid ah ku leedahay adrenal, limfaid, ugxan-galeen, xiidanka, dhiigga, kaadiheysta, naaska, sambabbada, iyo unugyada kansarka beerka.
waxay yareyn kartaa halista jirrooyinka maskaxda ee joogtada ah
Laga soo bilaabo natiijooyinka cilmi baarista, quercetin waxay kaa caawin kartaa kahortaga waallida, cudurka Alzheimers iyo xanuunada kale ee maskaxda xumaada.
Hal daraasad oo qaadatay seddex bilood, cirbadaha quercetin ayaa loo siiyay jiirka qaba cudurka Alzheimers. Dhamaadka saddexda bilood, waxaa la ogaaday in dhowr astaameeye oo loo yaqaan 'Alzheimer' ay yareeyeen jiirarkuna ay sifiican u sameeyeen imtixaanadii barashada.
Daraasad kale ayaa lagu sameeyay jiirarkii hore ee cudurka dabayaaqadii dabayaaqadii cudurku natiijadiina way fiicnaayeen. Xayawaanka waxaa lagu quudin jiray cunno hodan ku ah quercetin muddada daraasadda. Dhamaadkii, xooluhu waxay muujiyeen waxqabad maskaxeed oo horumarsan iyo dhimis calaamadaha cudurka Alzheimers.
Sanado badan, kafee waxaa lagu yaqiinay inay yareyso halista cudurka Alzheimer. Cilmi baaris ayaa muujisay in saameyntan ilaalinteeda ay ka timaado quercetin kafeega oo aan aheyn kafeyn.
waxay yareyn kartaa cadaadiska dhiigga
Baadhitaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in dhiigkarka sare uu yahay sababaha ugu dhimashada badan Mareykanka. Xaqiiqdii, xaaladdu waxay saameysaa mid ka mid ah seddexdii qaangaar ee Mareykanka.
Hal daraasad-tuubbo-tijaabo, quercetin ayaa la ogaaday inay leedahay awooda lagu dhimo heerarka dhiig karka. Xarunta ayaa la helay inay keento nasasho ee xididdada dhiigga.
Daraasad kale oo laga sameeyay jiirarka, ayaa waxaa lagu ogaadey in heerka dhiig karka iyo heerka systolic-ga cadaadiska dhiiga (hoose iyo kan sare) hoos loogu dhigo 23% iyo 18% siday u kala horreeyaan.
Dib-u-eegis lagu sameeyay daraasadaha aadanaha ee ku lug leh 580 qof, waxaa la ogaaday in dhiig karka iyo dhiig karka uu hoos u dhacay 2.6 mmHg iyo 5.8 mmHg siday u kala horreeyaan ka dib markii ay qaateen wax kabadan 500 mg oo ah quercetin supplement maalin kasta.
waxaa laga yaabaa inay horumariso caafimaadka dheef-shiid kiimikaadka
Cilmi-baarisyada qaar ayaa sheegaya in isticmaalka quercetin-ka uu horumarin karo caafimaadka dheef-shiid kiimikaadka. Hal daraasad 78 dumar ah oo buuran, polycystic ovary syndrome waxay qaadatay 1000 mg oo quercetin ah maalin kasta muddo 12 toddobaad ah. Natiijooyinka waxay muujiyeen in heerarka LH, testosterone, iyo aaladda iska caabin (buurnaanta buurnaanta) la yareeyay haweenkaas.
waxay ka caawisaa soo kabashada jimicsiga kadib
Faa'iidooyinka quercetin waxaa ka mid ah inay gacan ka geysato kobcinta soo kabashada kadib jimicsiga. Hal daraasad 30 baaskiil wadatayaal ah ayaa lagu dhejiyay quercetin of 1000 mg maalin kasta ka dib tababarka aadka u culus.
Kiimikada ayaa la ogaaday inay wanaajiso soo kabashadooda, gaar ahaan marka lagu daro waxyaabaha kale ee lidka ku ah caabuqyada iyo antioxidant-ka sida DHA, EPA, isoquercetin, iyo EGCG.
Daraasad kale, quercetin waxay yareeysay walaaca oxidative iyo bararka jimicsiga ka dib 2 toddobaad oo ragga dhallinyarada ah aan tababar lahayn.
daaweyn karaa boogaha
Hal tijaabo, 40 nin ayaa afka si toos ah ugu qaatay daawada quercetin. Xaaladaha kala badh, daroogadani waxay ka caawisay inay ka yareeyaan xanuunkooda 7 - 10 maalmood gudahood. Boogaha ayaa sidoo kale bogsaday.
Waxaa jira cilmi-baaris hadda socota oo lagu ogaanayo saamaynta quercetin ee ka hor tagista astaamaha acid, Helicobacter pylori, iyo boogaha caloosha.
Quercetin guud ahaan waa amaan sababtoo ah waxaa laga helaa miraha iyo khudradda. Xitaa kaabis ahaan, waxay umuuqataa inay aad u amaan tahay oo aan lahayn waxyeelo ama waxyeelo yar. Xaaladaha qaarkood, markii aad qaadatid wax kabadan 1000 mg oo daawada ah maalintii, waxaad la kulmi kartaa xoogaa Dhibaatooyinka 'quercetin' sida:
Xadhig iyo kabuubyo
Neefsasho gaabis ah
Dhaawaca kilyaha haddii si toos ah loogu maareeyo qiyaasta ka weyn 945 mg / m2
Matag iyo lallabbo
Markii cuntada lagu qaato, quercetin sidoo kale waxay u nabad tahay naasnuujinta iyo haweenka uurka leh. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan daraasado saynis ah oo lagu taageerayo badbaadada kaabisyada Quercetin ee naasnuujinta ama haweenka uurka leh. Markaa haddii aad uur leedahay ama aad naas nuujinayso, waxaad u baahan tahay inaad la tasho takhtarkaaga ka hor intaadan isticmaalin dawada si aad uga fogaato waxyeellooyin aan caadi aheyn.
Sida kaabayaasha kale oo dhan, haddii aad qaadatid dawooyin kale, waxaa lagugula talinayaa inaad la tasho takhtarkaaga kahor intaadan qaadan quercetin maxaa yeelay waxay la falgali kartaa daawooyinka kale.
Isdhexgalka Quercetin ee daroogada kale
Haddii bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga kugu amro inaad isticmaasho quercetin, u fiirso daawada kale oo aad hada isticmaaleyso. Bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga waa inuu ka warqabo wixii is dhexgal ah ee dhici kara inta udhaxeysa daawooyinka aad isticmaaleyso iyo isbadalada iyo wuxuu noqon doonaa mid kuhaboon inuu kula socdo isdhaxgalkaan. Markaad bilowdo isticmaalka quercetin, ha badalin, ha joojin, ama ha bilaabin inaad isticmaasho dawooyin kale kahor intaadan la tashan dhaqtarkaaga, farmashiistaha, ama bixiyaha xanaanada caafimaadka.
Quercetin waxay leedahay is dhexgal daran oo topotecan iyo everolimus laakiin waxay leedahay is dhexgal dhexdhexaad ah oo ka badan 60 dawooyin kale, oo ka mid ah:
Liiska kore ma aha mid dhameystiran. Marka, intaadan isticmaalin quercetin, u sheeg farmasiilahaaga ama takhtarkaaga dhammaan daawooyinka aad isticmaaleyso. Waxaad u baahan tahay inaad hayso liistada dhammaan daawooyinkaaga oo aad macluumaadkan la wadaagto daryeel caafimaad bixiyahaaga.
Daawooyinka qaarkood ayaa jebiya ama beddela beerka. Markaad qaadatid quercetin si wada jir ah daawooyinkaan, waxay yareyn kartaa heerka ay beerka jebiso ama u beddesho daawooyinkaan. Tani waxay kordhin kartaa waxyeelooyinka dawooyinka kale. Marka, ka hor intaadan qaadan quercetin-ka daawooyinka la beddelay ama jebiyey beerka, waxaad u baahan tahay inaad kala hadasho takhtarkaaga arrimaha ku saabsan. Daawooyinkaan qaarkood waxaa ka mid ah:
verapamil (Verelan, Isoptin, Calan, iwm)
Prandin (repaglinide), iyo kuwa kale.
Waxa kale oo jira dawooyin kale sida P-glycoprotein Substrates oo ay ku dhaqaaqaan bambooyinka unugyada. Marka quercetin loo isticmaalo daroogooyinka noocan oo kale ah, waxay kordhin kartaa heerka ay daawooyinkani kuqodaan iyadoo ka dhigaysa bambooyinku inay firfircoonaan. Markay taasi dhacdo waxyeelooyinka dawooyinkaan ayaa ka sii dari doona. Daawooyinkaan waxaa ka mid ah:
Verapamil (Ispotin, Calan, Verelan)
Cyclosporine (Sandimmune, Nestero)
Etoposide (VePesid, VP16)
Nizoral (ketoconazole), iyo kuwo kale.
Magaca quercetin wuxuu shaqeynayay ilaa 1857. Sidii horey loo sheegay, quercetin waa flavonoid waana kan ugu badan oo dhan. Dhirta kujirta Flavonoids waxaa loo isticmaalay dhaqamo badan qiyamka daawada. Si kastaba ha noqotee, flavonoids waxaa la helay 1930-kii waxaana loo aqoonsaday inay yihiin xeryahooda ka mas'uulka ah faa'iidooyinka caafimaad ee badan ee dhirta ay ku jiraan.
Quercetin wuxuu galay sancada dhawr sano ka hor markii saynisyahano ay ogaadeen inuu sababi karo is beddelka bakteeriyada, oo ah hanti lahaan kara cudurka kansarka.
Si kastaba ha noqotee, dhammaan dib-u-eegista iyo daraasadaha quercetin-ka, ka-kabashada ayaa la helay inay gacan ka geysato xakamaynta unugyada kansarka. Maanta, waxaa jira dib u eegisyo quercetin badan oo khadka tooska ah iyo habka ugu wanaagsan ee lagu aqoonsado alaab-qeybiyaha quercetin wanaagsan waa in la aqriyo faallooyinkaas.
Budada Quercetin ee iibka ah
Quercetin kaabis ayaa ku yimaada qaabab kala duwan. Qaarkood waxay ku yimaadaan foom kaabsal halka qaarna ay u yimaadaan qaab budo ah. Nooca kaabsooca ee quercetin waa fududahay in la liqo maxaa yeelay waa siqsi. Budada Quercetin ee iibka ah Waxa kale oo lagu heli karaa qaababka xanjo ee carruurta u fiican. Kaabida dareeraha dareeraha ah waxaa laga heli karaa meelaha qaar waxayna ku yimaadaan qaab wax lagu buufiyo ama dhibac ah.
Markay tahay xulashada kaabisyada quercetin, way wanaagsan tahay inaad tixgeliso qaabkee adiga kuugu fiican adiga. Dad badan ayaa soo sheegaya in budada quercetin supplements ay sifiican u shaqeyso oo ay fududahay in la isticmaalo. Qaababka budada ee quercetin ayaa sidoo kale lagu dari karaa cunto ama cabbitaan.
Budada Quercetin ee iibka ah ayaa lagu buuxiyaa tiro tixgelin siineysa qiyaasta quercetin ee lagula taliyay si aad u iibsan karto tirada saxda ah ee aad u baahan tahay. Qiyaasta budada quercetin (117-39-5) badanaa waa labo qaadoobo maalintii. Tani waxay kugu filnaan kartaa oo keliya haddii aad laakiin ka timaad ilo aamin ah. Budada quercetin oo tayadoodu aad u hooseyso ayaa laga yaabaa inay kaaga baahdo inaad isticmaasho wax ka badan laba mootooyin maalintii.
Wax kale oo aad u baahan tahay inaad tixgeliso markaad iibsaneyso budada quercetin waa xooggeeda ama awooddeeda. Budada quercetin oo tayo sare leh waa inay kujirtaa inta udhaxeysa 500 - 1,200 mg qiyaaskiiba. Wax kasta oo ka hooseeya taas laguma talinayo mana aha in la iibsado. Carruurta, qiyaasta daawada quercetin ee lagu taliyay waxay ku saabsan tahay 100 mg maalintii.
Budada Quercetin ee iibka ah Goobaha sumadda leh sida caadiga ah waxay ka kooban yihiin waxyaabo dheeraad ah oo dheeraad ah si kor loogu qaado astaamaha anti-bararka iyo antioxidant-ka quercetin.
Halka laga iibsado budada Quercetin
Meelo badan ayaa laga heli karaa iibso budada quercetin. Goobahani waxay sidoo kale ku iibiyaan budada quercetin fara badan haddii aad rabto inaad dib u iibiso.
Warbixinadu waxay muujiyeen in dhammaan alaabooyinka quercetin-ka aysan ku jirin waxa ay sumaduhu ku andacoonayaan inay ka kooban yihiin. Kadib iibsashada, dib u eegista, iyo tijaabinta noocyo kala duwan oo quercetin ah oo loo adeegsaday Mareykanka, daraasad ayaa lagu ogaadey in laba alaab ay ka kooban yihiin 14% wax ka yar quercetin in waxa lagu qoray magacyadooda.
Taasi waa sababta ka hor intaadan iibsan budada quercetin, waxaa wanaagsan in sidaas la sameeyo oo keliya laga helo ilo aamin ah ama sumcad sumcad leh iibiyaha quercetin.
Waxaad ka iibsan kartaa qaawan internetka, laakiin kahor intaadan sidaas sameyn, hubso inaad aqriso dib-u-eegistooda khadka tooska ah si aad u ogaato waxa ay macmiilayaashoodu hore leeyihiin. Haddii ay suurtagal tahay, u oggolow asxaabtaada ama xubnaha qoyskaaga inay kugula taliyaan alaab-qeybiye wanaagsan.
Ma waxaad dooneysaa dukaan internetka ah oo leh budo quercetin tayo sare leh iyo adeegga macaamiisha aad u fiican? Waad naga dalbankartaa annaga.
Quercetin waa flavonoid aad loo jecel yahay. Kordhinta ayaa lala xidhiidhiyey hoos u dhaca heerarka sonkorta dhiigga, dhiig karka, bararka, iyo kor u qaadista waxqabadka jimicsiga. Saynisyahannadu waxay kaloo rumeysan yihiin in quercetin-ka uu leeyahay xasaasiyad xasaasiyadeed, xasaasiyad, iyo waxyaabo maskaxda ka ilaaliya.
Haddii aad rabto inaad ku darto cuntadaada quercetin, waa inaad marka hore talo ka raadsataa dhakhtar ama bixiye daryeel caafimaad. Ugu dambeyntiina, hubi inaad ka iibsatid budada quercetin kaliya alaab-qeybiyeyaal sumcad leh.
Quercetin, Caabuqa iyo xasaanadda, Yao Li, Jiaying Yao, Chunyan Han, Jiaxin Yang, Maria Tabassum Chaudhry, Shengnan Wang, Hongnan Liu, iyo Yulong Yin2, NCBI.
Davis JM, Murphy EA, Carmichael MD Saamaynta cuntada quvetetin flavonoid ee waxqabadka iyo caafimaadka. Isboortiga Med. Rep. 2009; 8: 206–213.
Formica JV, Regelson W (1995). "Dib u eegista bayoolaji ee quercetin iyo bioflavonoids la xiriira". Cuntada iyo Kiimikada Kiimikada. 33 (12): 1061-80.
1.Waa maxay quercetin?
2.Sidee buu u shaqeeyaa Quercetin?
7.Quertetin oo la falgasha daawooyinka kale
Dib u eegista Qercetin
9.Quercetin budada iibka ah
10.Waxaa laga iibsadaa budada Quercetin
11. Erayada Dambe
Val wuxuu leeyahay,
February 24, 2021 at 6: 47 pm
Waxaa la igula taliyay inaan budada ku darin biyo diirran. Kama cabbo cabitaannada la soo jeediyey.
Ma hagaag baa in lagu daro boorashka iyo cashada maadaama kuwani ay yihiin cuntooyin diirran fadlan
Waxaa lagu diray dhoola cadeyn ka timid Val 🐨
Jacquelyn wuxuu leeyahay,
April 2, 2021 at 12: am 01
Waad salaaman tahay, ma ogtahay dhaqtar sameynaya tijaabo caafimaad oo isticmaalaya quercetin kansarka kaadi haysta. Ma ogtahay xirfadle dabiici ah oo bixiya hagitaan ku saabsan daaweynta kansarka kaadiheysta ee quercetin?